Mogadishu Journal » Xan ayaa Leh: Neymar oo ku dhow cusbooneysiinta PSG, mustaqbalka Haaland
Xan ayaa Leh: Neymar oo ku dhow cusbooneysiinta PSG, mustaqbalka Haaland
Muddo dheer, Neymar ayaa loo saadaalinayay inuu dib ugu biirayo Barcelona ka dib markii uu ka tagay Camp Nou heshiis rikoor adduunka ah 2017.
Laakiin mustaqbalka Neymar ayaa ku dhow in la dhameystiro.
Paris Saint-Germain ayaa qarka u saaran inay ceshato xiddiga reer Brazil.
TOP SHEEKADA - NEYMAR IYO PSG AY KU CUNTO IN LAGU SOO CELIYO
Neymar ayaa ku dhow inuu heshiis cusub u saxiixo kooxda heysata horyaalka Ligue 1 Paris Saint-Germain, sida laga soo xigtay Canal +.
Xiddiga kooxda PSG ee Neymar ayaa wadahadalo heshiis kordhin ah kula jira kooxda waxana uu si cad ugu balan qaaday mustaqbalkiisa fog kooxda kadib u soo bixitaankoodii champions League.
Markii hore lala xiriirinayay inuu ku laabanayo Barcelona, ​​Neymar ayaa saxiixi kara cusbooneysiintiisa ka hor kulanka Champions League ee ay la ciyaarayaan Manchester City.
- Mustaqbalka Erling Haaland ayaa wali hawada ku jira, sida ay qortay Diario AS. Baahida loo qabo Borussia Dortmund ayaa lala xiriirinayaa Barca, Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Liverpool, PSG, Juventus, Chelsea iyo Bayern Munich. Wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan dhaq dhaqaaqiisa xiga ayaa sii xoogeystay markii uu raacay kabtanka Barca Lionel Messi bartiisa Instagram iyadoo ay xiiseyneyso kooxda Camp Nou.
- Diario Sport ayaa sheeganeysa in wadahadaladii heshiis kordhinta ee Ousmane Dembele iyo Barcelona ay istaageen. Dembele, oo qandaraas kula jira ilaa 2021-22, ayaa lala xiriirinayaa United iyo Liverpool.
- United iyo Liverpool labaduba waxay isha ku hayaan xiddiga Sevilla Youssef En-Nesyri, sida uu sheegayo Estadio Deportivo. Sevilla ayaa lagu soo waramayaa inay dalbaneyso £ 40million (€ 46m) weeraryahanka.
- Kooxda awooda weyn ee Ruushka Zenit ayaa xiiseyneysa saxiixa daafaca Barca Samuel Umtiti, sida uu warinayo Fabrizio Romano. Liverpool, United iyo Chelsea ayaa horay loola xiriirinayay.
- Gianluigi Donnarumma iyo Milan ayaa wali ku jira xaalad caqabad ku ah wadahadalada heshiis kordhinta, sida uu sheegayo Gianluca Di Marzio. Xiddiga Milan iyo goolhayaha reer Talyaani ayaa qandaraaskiisu dhacayaa dhamaadka xiliciyaareed kaan, kooxaha sida PSG, Chelsea, Juve iyo United ayaana ka mid noqday meelaha ay suurta galka tahay.
Madaxweyne Farmaajo oo kulan la qaatay dhigiisa Felix Tshisekedi (Daawo Sawirro)